Soo dejisan FIFA 15 Ultimate Team 1.5.5 – Vessoft
Soo dejisan FIFA 15 Ultimate Team
FIFA 15 Ultimate Team – dejiyaan caan ah kubada cagta ka Electronic Arts. Ciyaarta jiro set weyn ee ciyaartoyda, kooxaha kala duwan, garoomada halyeeyga iyo horyaalada kubada cagta. FIFA 15 Ultimate Team kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan kooxda u gaar ah iyo in la shaqaaleeyo ciyaartoyda kubada cagta tayo leh si ay xulka lacagta ciyaarta. Kulankaan ayaa awood u adeegsiga farsamada, si ay u qabtaan bedelka ciyaartoyda iyo qorsheeyo style ama xeelado ah kulan ka. In FIFA 15 Ultimate Team waxaa jira muuqaallo kale ee tayo sare leh kaas oo ka dib dhaqdhaqaaq dabiiciga ah iyo kuwa aan xaqiiqada ah characters. Management of FIFA 15 Ultimate Team waxaa sameeya hab of badhamada taabashada ku yaal cidhifyada qalab shaashadda iyo gamepads.
Xulashada ciyaartoyda badan ee, kooxaha iyo horyaalada kubada cagta
Waxay abuurtaa kooxda u gaar ah
Qorshooyinka ah xeeladaha of kulan
Naqshadeynta Suurogal ah
Hababka kala duwan ee maamulka
FIFA 15 Ultimate Team Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Pou 1.4.67
العربية, English, Українська, Français... ColorNote 3.10.6
العربية, English, Français, Español... Microsoft Office Mobile 15.0.4522.2000